वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : February 2010
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ February 23, 2010
प्राध्यापकको प्रवचनमा नेपालले अपनाउन लागेको संघीयताका बारेमा उहाँका धारणाहरु थिए मूलत:। कस्तो खाले संघीयता भन्ने कुरामा पश्चिमा वा अरु कसैको पनि प्रेस्कृप्सनलाई हु-बहु पछ्याउनु गलत हुने र नेपालीहरु आफैंले विकास गर्ने मोडेलमात्रै सफल हुने धारणा थियो उहाँको। उहाँका अनुसार नेपालको भू-राजनीतिक र आन्तरिक दुबै स्थिति पूर्व यूगोस्लाभियासंग धैरै मिल्छ। प्रवचनबाट जापानकै सामाजिक-राजनीतिक पक्षका नयाँ कुराहरु पनि जान्न पाईयो। जापानका अल्पसंख्यक जाति/समूहहरुमाथि अझसम्म पनि हुने दुर्ब्यबहार र पक्षपातका कुराहरुको बारेमा पनि बोल्नुभएको थियो उहाँले। विगतमा नेपालका दलितजस्तै अपहेलित जापानको अल्पसंख्यक 'बुराकु' (Burakumin) भनिने जातिको हुनुहुँदोरहेछ प्रोफेसर र उहाँका अनुसार कानूनी बिभेद नदेखिएपनि जापानी समाजमा उनीहरुलाई गरिने ब्यबहार अझै पनि राम्रो छैन। रोजगारी र सामाजिक जीवनमा अझै पनि प्रशस्त बिभेद देख्न सकिने रहेछ। नेपालको दलित आन्दोलनसंग पनि सम्बद्ध हुनुहुँदोरहेछ प्राध्यापक। नेपालबारेको उहाँको जानकारी साँच्चैनै विस्तृत र गहन थियो।
त्यसपछिका दुई सत्रहरुमा एकजना नेपालविज्ञ जापानी प्राध्यापक र जापानमा अध्ययन/अनुसन्धानरत छ नेपाली विद्यार्थीहरुले आफ्ना पेपरहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। Introduction to Fiber Optic Communication and Status in Nepal शिर्षकको आफ्नो प्रस्तुतिका साथ मधुसुदन कायस्थ
An Introduction to Early Childhood Development (ECD) Program in Japan शिर्षकमा सोविता कोइराला Community Based Rehabilitation in Nepal:Challenge for Inclusive Society शिर्षकमा नेपालका अपाङ्गहरुको सामाजिक/आर्थिक स्थितिको बारेमा प्रस्तुति दिँदै Hamamatsu University-Japan Nepal Educational Cooperative Society का प्राध्यापक मासायुकी वातानाबे ( उहाँले केहि वर्ष नेपालमा काम गरिसक्नुभएको रहेछ र उहाँ सरल नेपाली बुझ्नुहुँदोरहेछ।) Effects of FRP Reinforcements on the Buckling and Reduced Stiffness Criteria of Compressed Steel Cylinders शिर्षकमा आफ्नो अनुसन्धान परिणाम प्रस्तुत गर्दै कृष्ण कुमार भेटवाल
Smart Contractor: A distributed Task Assignment System Based on the Simple Contact Net Protocol शिर्षकका साथ आफ्नो संलग्नतामा विकसित एक सफ्टवयेर प्रोग्रामको बारेमा जानकारी दिँदै बिपिन खनाल Potential and Problems in the Development of Micro-Hydro in Nepal विषयक प्रस्तुतिमा होम प्रसाद अधिकारी कार्यक्रमको अन्त्यमा जापानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको बारेमा बनाईएको एउटा डकुमेण्ट्री देखाउने तयारी गर्दै सरोज कँडेल ब्यबश्थापनमा ब्यस्त विमल अधिकारी
जापानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको छाता संगठन छ, नेपाली विद्यार्थी समाज, जापान (Nepalese Students' Association in Japan)। छोटकरीमा यसलाई NESAJ (नेसाज) भनेर पुकार्छौं हामी। जापानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरु र (मूलत: जापानमा कार्यरत) भूतपूर्व नेपाली विद्यार्थीहरुलाई एकताबद्ध पार्ने, आपसी अन्तर्कृयाका माध्यमबाट ज्ञान/सीप आदानप्रदान गर्ने र बिभिन्न माध्यमबाट नेपालको विकासमा योगदान पु-याउने उद्देश्य बोकेको यो संस्था सन् १९९७ देखि जापानमा कृयाशील छ। नेसाजका बारेमा थप जानकारी तपाईँ यसको गृहपृष्ठ बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रममा सक्दो सहभागिता जनाईदिनुहुन सबैमा हार्दिक अनूरोध र निमन्त्रण पनि गर्न चाहन्छु यो टाँसोको माध्यमबाट। जापान बाहिरका साथीहरुलाई सम्भव नहोला पक्का पनि, तर यहि निहुँमा गृहपृष्ठका माध्यमबाट नेसाज र आगामी कार्यक्रमका बारेमा केहि जानकारी भने लिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। बाँकी कुरा कार्यक्रम पछिका लागि थाती राख्दैछु:)
तिमी छ्यौ र त पवित्र मन्दिर लाग्छमलाई मेरो हरेक बास,अहोभावले भरिएका छन्मेरा प्रत्येक पलहरुर प्रार्थना जस्तो लाग्छ हरेक श्वास;
लहर लागेर तैरिरहेका छन्खुशीका सहस्र जोडी राजहाँसमेरो आँखाको आकाशमा,र उडेर जुन क्षितिज पुगेपनिसधैँ सधैँको लागि जोडिएका छन्तिम्रो आँचलको एक छेऊमा;
मेटिएको छ मेरा लागि अबहिऊँद र वसन्तको भेद,तिमी हुनुको मेरो खुशीमापागलपन चढेको छ रुखहरुलाईर निर्वस्त्र नाचिरहेछन्,
मुटु जमेर कठ्याङ्रिएको हैन यो रात-तिमी हुनुको खुशीले अवाक् मात्रै होसेतो पछ्यौरीभित्रको यो रात,आफ्नै लागि लाम्बिएको हैन यो रात-मेरो दिनलाई अलिक बढी घाम टिपेर दिनतन्किएको मात्रै हो यो रात,हो प्रिय,तिमी हुनुको खुशीलेअवाक् मात्रै हो यो रात।
(डिसेम्बर १२, २००५; खासुगाई, आइची, जापान) Image Source : Click Here Posted by
स्वर्ण पदक विजेता विनिता महर्जनजी (तस्बीर साभार:नागरिक दैनिक) पहिला, ढाकामा जारी एघारौं दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) मा नेपाललाई पदक दिलाउने खेलाडीहरुलाई हार्दिक बधाई र धन्यबाद! पदक पाएपनि-नपाएपनि देशका लागि मेहेनत गर्ने सम्पूर्ण खेलाडीहरुलाई हार्दिक धन्यबाद!
र खेलकूद पदाधिकारीहरुले गरेको देशको घोर बेईज्जतीको लागि तिनलाई धिक्कार र 'थुक्क!'! यो टाँसो अहिले लेख्न थाल्नुअगाडि पढेका एक दुई समाचारले मेरो मनको तितो अलिक कम गरिदिएका छन् तर सरोकारवालाहरुसंगको आक्रोश भने ज्यूँका त्यूँ छ।
अघि भर्खर पदक तालिका हेर्दा (11th South Asian Games) नेपाल छैठौं स्थानमा छ। दशकौंको बिदेशी हस्तक्षेप, गृहयुद्ध र आतंकवादले जर्जर भएको अफगानिस्तान समेत हामीभन्दा माथि छ। मार्शल आर्ट्सले अलि-अलि पदक थपेपनि माथि उक्लन अब त्यति सम्भव छैन नेपाललाई। हाम्रा खेलकूद पदाधिकारी र सरकारले त अब 'भुटान र मालद्विभ्सभन्दा त माथिनै छौं नि!' भन्दिन पनि बेर लगाऊँदैनन्, लाज नभएका नकचरा र हरामहरु हुन् यी!
क्रिकेटलाई छोडेर पूरै दक्षिण एशिया आफैं खेलकूदमा धेरै तल छ। त्यसको पनि पिँधमा पुगेपछि बिश्व‍-खेलकूदमा हाम्रो ठाऊँ कुन रसातलमा होला, अनुमान गर्नुहोस्। खेलाडीभन्दा दश गुणा बढी पदाधिकारीहरुको जन्ती, देशको झण्डाको अपमान, पुरानो राष्ट्रिय गान, खेलाडीहरुलाई निम्नस्तरीय बसोबास, दुर्घटनामा घाइते खेलाडीहरुको बेवास्ता र दुनियाँको अगाडि आफू-आफूमै हात हालाहाल! अब देशको बेईज्जत हुन केहि बाँकी रह्यो र?????
कालो झण्डा देखाउनुपर्ने हुन् यी खेलकूद पदाधिकारीहरु! साग सकिएपछि फर्किँदा बिमानस्थलमै यी मध्ये केहिलाई कालोमोसो दल्नुपर्छ र जुत्ताको माला लगाएर काठमाण्डु पूरै घुमाउनुपर्छ। र सत्ता टिकाउन मनपरी जन्ती लान दिने र गतिलो ब्यबश्थापनको निर्देशन दिन नसक्ने लाचार सरकारलाई धिक्कार छ!!!! देशको इतिहासमा कालो नाम लेखाउन यो सरकारका लागि ११औं सागनै काफी भयो!
खेलकूद केवल खेलकूद होईन, यो एउटा सभ्य देश र समाजको चिनारी हो। खेलकूद प्रतिष्पर्धा त हुँदै हो, त्यसमाथि यो एउटा उद्योग, एउटा ब्यापार र एउटा सफल कूटनीति पनि हो। वर्तमान बिश्वमा खेलकूद राष्ट्रिय गौरव बृद्धि गर्ने, नयाँ पुस्ताका लागि 'हिरो'हरु र 'आइडल'हरु दिने एउटा सशक्त र भरपर्दो माध्यम हो। हाम्रो खेलकूदको यो घोर बेईज्जतीले फेरि एकपटक हामी खेलकूदले प्रतिनिधित्व गर्ने यी सबै पक्षमा चरम रुपमा असफल छौं भन्ने देखाएको छ। हरेक प्रतियोगिताहरुले यहि सन्देश दिन थालेको धेरै भईसक्यो तर कान नभएका 'सर्प' हाम्रा दलहरुले अहिलेसम्म एकैछिन पनि यतातिर सोच्ने कोशिश गरेका छैनन्।
यो स्थिति आईपुग्नुमा खेलाडीहरुको भने अलिकति पनि दोष छैन। तालीम र प्रशिक्षणको अभाव, अवसरहरुमा पक्षपात र चरम अब्यबष्थापनको माझबाट पनि जति उपलब्धि उनीहरुले देशलाई दिएका छन्, त्यसका लागि उनीहरु धन्य छन्।
साग-११ मा नेपालको घोर बेईज्जतले मलाई २०४६ साल अघिका पञ्चायती दिनहरुमा पु-यायो। पञ्चायतपछिका दिनहरुमा देशले केहि पक्षमा राम्रा कुराहरु पायो होला तर खेलकूदको क्षेत्रमा भने देश दशकौंपछाडि धकेलिएको छ। त्यो बेला नियमित रुपमा राष्ट्रिय-क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिताहरु भईरहन्थे। राजाको नामनै जोडिएको सही, बीरेन्द्र शील्ड भनिने वार्षिक राष्ट्रब्यापी खेलकूदका कारण स्कूल-स्कूलका, गाऊँ-गाऊँका प्रतिभाशाली खेलाडीहरु सबैका नजरमा पर्थे र तिनले प्रशिक्षण र थप प्रतियोगिताहरुको अवसर पाऊँथे। खेलकूदका हकमा अहिलेको दाँजोमा पञ्चायतसंग एउटा समग्र राष्ट्रिय दृष्टिकोण र योजना थियो। त्यतिखेर नेपाल यस्ता साग गेममा भारतको प्रतिष्पर्धी मानिन्थ्यो। फुटबलमा हामी स्वर्णकै दावेदार मानिन्थ्यौं। हामी बिस्तारै दक्षिण एशियाली मापदण्डलाई नाघ्नसक्ने हैसियतमा पुग्दै थियौं जस्तो लाग्छ मलाई त।
अहिले 'खुट्टा तान्ने' राजनीतिक प्रतियोगितामा मात्रै राज्यको ध्यान छ। नीजि क्षेत्रले केहि गर्न नसक्ने होईन तर त्यसको प्रभाव कम हुन्छ। हाम्रो जस्तो आर्थिक/राजनितिक अबष्था भएको देशमा जबसम्म खेलकूदको विकासका लागि राज्य आफैंले एउटा स्पष्ट खाका ल्याउँदैन र प्रणालीबद्ध र संयोजनकारी काम गर्दैन तबसम्म नीजि क्षेत्रको लगानी पनि बालुवामा पानी हालेभन्दा बढी हुँदैन।
पञ्चायतको गुणगान गाउनु मेरो उद्देश्य होईन यहाँ। पञ्चायतले आफू र निरकुंश राजतन्त्रलाई जोगाउन खेलकूद र खेलाडीहरुको दुरुपयोग पनि गरेको थियो। र जुन उपलब्धि पञ्चायत कालमा नेपालले खेलकूदमा प्राप्त गरेको थियो, नेपाली जनताको खेलकूदप्रतिको आकर्षण र नेपाली खेलाडीको सम्भावित क्षमताको दाँजोमा अझै कम हो।
तर अहिलेको दुर्दशा देख्दा र निकट क्षितिजमा सुधारको कुनै किरण नदेख्दा म पञ्चायतकाललाई नेपाली खेलकूदको स्वर्णकालका रुपमा स्विकार्न बाध्य छु, विवश छु।
देशका पूराना मूर्ति चोरेर बिदेशीलाई मोटो दाममा बेच्ने र लागू पदार्थको कारोबार गर्ने शक्तिशाली गिरोहको नाइके पनि उनै मानिन्थे। यसै क्रममा कुनै बैशाख एकको राती, पूरा काठमाण्डौं उपत्यकाको बत्ती निभाएर भक्तपुरको भूपतीन्द्र मल्लको शालीक उखेल्न दलबलसहित क्रेन लिएर उनी त्यहाँ पुगेको तर त्यहाँ खटिएका नेपाल प्रहरीका एक निर्भीक इन्स्पेक्टर रुपकराज शर्मा (जो एक समयका चर्चित फुटबल खेलाडीसमेत थिए) का कारण उनको योजना असफल भएको अर्को एउटा हल्ला पनि आँधीजस्तै फैलिएको थियो। पूरा काठमाण्डौं उपत्यकामा एकैचोटि बत्ती निभेको त्यो रात याद छ मलाई। उनले आफ्नी श्रीमतीलाई सधैं निर्घात चुट्ने कुरा पनि चर्चाको केन्द्रमै रहिरहन्थ्यो सधैं।
गज्जब लाग्छ मलाई! कुरा आकाश-पाताल जोड्ने गरी आदर्शका गर्ने तर ब्यबहारमा धीरेन्द्र प्रवृत्तिसंग अगाध प्रेम देखाउने, त्यसैसंग घाँटी जोड्ने! यो कुन 'वाद' हो कुन्नि, मजस्तो अदना नेपाली नागरिकले बुझ्न कठिन भयो। Posted by